कपाल के कारणले गर्दा झर्छ र झर्न नदिन के गर्ने ? « News24 : Premium News Channel
कपाल के कारणले गर्दा झर्छ र झर्न नदिन के गर्ने ?
एजेन्सी । आजकल महीला र पुरुष दुबैमा कपाल झर्ने समस्या निकै देखिने गरेको छ। शारीरिक तनाव ,शल्यक्रिया गरेको अवस्था, दुर्घटना, गम्भीर बिरामी अथवा सामान्य रुघा नै किन नहोस्, कपाल झर्छ ।यस्तो अवस्थाको कपाल झराई अस्थायी किसिमको हुन्छ । कपाल झर्ने यस्तो अवस्थालाई ‘टेलागेन इफ्लुभियम’ भनिन्छ ।
घाँटीमा भएको थाइराइड ग्लान्डले एक किसिमको हर्मोन उत्पादन गर्छ, जुन मेटाबोलिजम, वृद्धि र विकासका लागि गम्भीर मानिन्छ । जब यस्तो हर्मोन आवश्यकमात्रामा निस्कदैन, कपाल झर्न थाल्छ ।अमेरिकाजस्ता देशमा एकदमै कम केश पाइएपनि भिटामिन बीको कमीका कारण पनि कपाल झर्ने समस्या हुन्छ । यसको समाधानका लागि भिटामिन बी पाइने खाद्य पदार्थहरु फलफुल, माछा, मासु, तरकारी प्रशस्त खानुपर्छ।
कपाल झर्ने समस्याको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ ।
१. प्याज र कागतीःजहाँ जहाँ कपाल कम छ दैनिक बराबर मात्रामा प्याज र कागतीको रस लगाउनुस्। रस लगाएको आधा घण्टा पनि टाउको पखाल्नुस्।
२.हरियो धनियाँःकपालको जरामा हरियो धनियाँको रस लगाउनुस्। १५ मिनेट पनि पखाल्नुस्। यसले कपाल बाक्लो आउँछ अनि चमक पनि बढ्छ।
३.निम र अमला ःनिमको पात र अमला पानीमा उमाल्नुस्। पानी सेलाएपछि यही पानीले टाउको पखाल्नुस्। हप्तामा कम्तिमा २ पटक यसो गर्नुहोस्।
४. केराःकेराको पेस्टमा कागतीको रस मिलाइ कपालमा लगाउनुस् अनि आधा घण्टा पछि सादा पानीले कपाल धुहोस्।
कपाल पखाल्दा स्याम्पु सधै एकै खाले मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सामान्य बजारमा पाइने स्याम्पु भन्दा आयुर्वेदिक औषधी पसलमा किन्न पाइने स्याम्पुको प्रयोग बढी प्रभावकारी हुन्छ।
हेटौंडा अस्पतालमा डाक्टरहरुको मनोमानी, बेवारीसे शब राख्ने रेफ्रिजेरेटरसमेत बिग्रियो
मेडिकल काउन्सिलद्वारा बुझिने अक्षरमा प्रेस्कृप्सन लेख्न चिकित्सकहरुलाई निर्देशन
सरकारी र निजी अस्पताल एकअर्काका परिपूरक : प्रदेश प्रमुख कोइराला
कपाल फुल्ने र झर्ने भएर दिक्क हुनुभए यसो गर्नुस्
खाली खुट्टा हिँड्दाकाे फाइदा
मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सी धमाधम कारबाहीमा
३० हजार घुस लिदाँलिँदै लालबाबु पण्डित र बाबुसाहेव सिंह रंगेहात पक्राउ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलाे दुर्घटना टर्याे, मलेसियन विमान यसरी जाेतियाे घाँसे मैदानमा
७ करोडको पिच केही दिनमै यसरी उप्कियो, सिधाकुरा टिममाथी गुण्डागर्दीको प्रयास ! (भिडियोसहित)
लहरे आँपको राम्रो सम्भावना
गौँथलीका बचेरालाई आहारा
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
संयुक्त रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस मनाइने